Banyere Anyị - Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co., Ltd. (DHUA) nke a na-akpọ Dongguan Fenghua Acrylic & Mirror Craft CO., Ltd, bụ onye na-emepụta enyo plastic na onye na-azụ ahịa nke dị na Dongguan obodo, China. A hụrụ na 2000, DHUA gbara mbọ inye akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị elu dị iche iche na ọtụtụ enyo enyo, dị ka enyo acrylic, enyo polystyrene, enyo polycarbonate, enyo PETG, enyo mgbochi igwe, enyo ụzọ abụọ, convex mirror, convex / concave lens na Fresnel mirror yana belata ka ọrụ.
Na elu n'ichepụta teknụzụ na akụrụngwa, DHUA awade ọkachamara na Onye-Kwụsị Services ahịa site gụchara dum mmepụta usoro nke na-eme transperent mpempe akwụkwọ, agụụ plating, ọnwụ, shaping, thermo akpụ site onwe anyị. Na ezi mmepe nke ụlọ ọrụ, DHUA ugbu a na-a àgwà emeputa nke kasị mma na acrylic (PMMA) mirror Ibé akwụkwọ ngwaahịa na China site na mgbalị anyị ihe karịrị afọ 20.
A na-etinye akwa mpempe akwụkwọ a n'ọtụtụ ebe dị ka egwuregwu ụmụaka, arịa ụlọ, ọrịre / Ebe a na-azụta, ngosipụta mkpọsa, akara ngosi, nchekwa, ihe ịchọ mma, na akụrụngwa.
Ogo na-eduga emeputa ke China
Usoro mmepụta akpaka nke oge a
Nkezi mbido kwa ụbọchị
DHUA na-amata na onye ahịa nwere afọ ojuju dị mkpa maka ndụ anyị, ọganihu anyị na ikike anyị nwere itolite. Dika nzukọ edebanyere ISO-9001 na ụlọ ọrụ High Technology Enterprise, na-egbo mkpa nke ndị ahịa anyị na ngwaahịa na ọmarịcha ọrụ bụ isi ọdịbendị nke ọrụ nrụpụta anyị, nkwupụta a ga-anọchi anya na ọrụ niile ndị ọrụ DHUA mere.
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ DHUA bụ ọrụ maka ogo na oge nke ngwaahịa anyị. Ngwaahịa anyị niile gbaara mba niile, dịka Rohs, EN-71, ASTM, REACH na SGS.
Nkà ihe ọmụma anyị dị mma malitere na 2000 ma wetara anyị ezigbo aha. Taa Donghua bụ onye ndu dị mma, na-ewe ihe karịrị ndị ọrụ 300 ma na-ejere ndị ahịa ụwa ozi karịa mba 80. Anyị emeela mmekọrịta dị ogologo oge na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ike dịka NVC, Li & Fung, Hasbro, Sony, Mcdonald's, Mattel, Estee Laudder, Dior, Greek, Ge Lanshi na Midea ect.
Ndị otu anyị bụ ndị otu gị. Anyị dị n'otu na-eme ike anyị niile iji jeere gị ozi na otu ndị otu ọkachamara anyị nwere nke nwere ndị nwere mmụọ, ndị otu na ndị nwere ọgụgụ isi.